November 2013 - Page 7 of 7 - iftineducation.com
Diyaarad Dab qabsaday & Rakaabkii saarnaa oo naf jaceyl dartiis qaarkood iyaga oo qaawan baxsaday (Daawo Muuqaal+Warbixin) !!
aadan21 / November 8, 2013
iftineducation.com – Garoonka Diyaaradaha Trudeau ee magaalada Montreal ee dalka Canada ayaa waxaa ka dhacay kala carar ka dib markii garoonkaas ay ku soo degtay Diyaarad gubaneeysa oo laga leeyahay dalka Marooko oo waliba siday Rakaab tiradooda lagu sheegay 250 Qof. Diyaaradaan oo dab xoogan uu qabsaday waxaa mar quraah shook iyo naxdin qaaday inta badan dadkii saarnaa Diyaaradaan kuwaas oo…
Maxaad ka ogtahay Magaca ugu badan ay la baxaan Dadka Dunida kunool Xiligan ?(Warbixin Xiiso Badan)
iftineducation.com – Daraasad dhawaan lagu sameeyay magacyada ugu badan ee dadku la baxaan ayaa waxaa lagu ogaaday in magaca ugu badan ee dadku la baxaan uu yahay magaca MAXAMED. Magacaan oo ah magaca nabigeena Max’ed NNKH ayaa dad badan oo malaayiin ruux ah oo dunnidaan ku nool hadda la yiraahda. Darasadaan oo uu sameeyay wargeys la yiraahdo ABC oo kasoo baxa…
Maraykanka oo qarash badan kusiiyay Xarakada Al-Shabaab Weerarkii Westgate Mall(Xog iyo Sawiro)
iftineducation.com – Sida lagu qoray wargeyska Daily Mail ee kasoo baxa wadanka Ingiriiska hay’ada sirdoonka Maraykanka ee CIA,da ayaa dhaqaalo fara badan ku bixisay weerarkii bishii September lagu qaaday suuqa West gate Mall ee magaalada Nairobi . Xogtaan oo uu wargaysku helay ayaa waxaa uu ku sheegay in nin magaciisa lagu sheegay Morten Storm oo u dhashay dalka Denmark uu dhawr…
Daawo Dad Cadaan ah oo Calanka Soomaaliyeed Dusha ku Sawirday ee Gawaari la Saaran
iftineducation.com – Kooxaha wadaniyiinta Soomaaleed ee ku faana saacad walba Calanka Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo saareen muuqaal soo jiitay qof kasta oo dhiig leh kaas oo loogu magac daray ISRAAC . Muuqaalkaan cusub ayaa lagu faafiyay barta Internet-ka waxaana isku sii dir diray ama isku xawilay taageerayaasha Calanka Soomaaliyeed iyo kuwa wadaniyiinta ah (share a Video) . Muuqaalka ISRAAC oo…
DEG DEG – Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay aafafka hore ee Hotel Maka Al-mukarama
iftineducation.com – Wararka inaga soo gaaraaya Magaalada Muqdisho, ayaa waxay sheegayaan in uu caawa ka dhacay weerar ismiidaamin ah, irida hore ee laga galo Hotel Maka Al-mukarama. Weerarkaan, ayaa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kaasoo afka loo geliyay irida laamiga saaran ee Hotel Maka Al-mukarama. Qaraxaan, ayaa waxaa laga maqlay inta badan Magaalada Muqdisho, waxaanu uu sababay…
Ka Digtoonoow Arimahaan Waxa Ay Keenaan Khiyaano Qoyseed.
iftineducation.com – Haween badan ayaa ka sheegta khiyaano uga timaada raggooda , waxa ayna haweenka inta badan is weydiiyaan waxa keena arintaas . Hadaba iftineducation ayaa ku siineysa sababta ka dambeysa arimahaas . 1- Ninkaada diyaar uma aheyn in uu xariir kuula sameeyo : waxaa laga yaabaa in ninkaada uu ku jecel yahay kuuguna guursaday qanacsanaan balse cabsida uu ka qabo…